प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रियंकाको सुझाव – भोट पाउनेलायक काम गरेर त देखाउनुहोस पहिले । – Yuwa Aawaj
जेठ १६, २०७८ आइतबार 300
काठमाडौं: चर्चित नायिका प्रियंका कार्कीले चुना’वको भोटको आशा गर्ने सरकारलाई पहिले भोट पाउनेलायक काम गरेर देखाउन सुझाव दिएकी छिन् । उनले अहिले कोरो’नासँग जनता जु’धिरहेको र जनताको अवस्था दयनीय रहेको बताउँदै अहिले चुनाव नचाहिने बताएकी छिन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेकी हुन् । उनले सरकारमा ब’सेकाहरुलाई आँखा खोलेर एक पटक देशको स्थिति नियाँलेर हेर्न पनि सु’झाव दिएकिछिन्। उनले आहिलेको समयमा देश र जनतालाईं चूना’व नचाहिने पनि बताएकी छिन् ।
उहाँको लेख्नुभएको स्टाटस !
हाम्रो नेपाल सरकार प्रति बिनर्म अनूरोध!
आखा खोलेर एक़ पटक निहालेर देशको स्तिथि हेरनूस! आहिलेको समयमा देश र जनतालाईं चू’नाव चाहिदैन! यो आहिले प्राथ’मिकतामा पर्देंन। यति सामान्य कुरा पनि देखन र बुझ्न नसकने?
देश हाक़ने शक्ति, देशलाईं प्रगति र उन्नतिको मार्गमा लाने र ईमा’नदारी र ज़ि’म्मेवारीको साथ देश र जनताको सेवा र सुरक्षा गर्ने यो सरकारको दायित्व होईन र ? हज़ारौको दरले दैनिक को’रोना सं’क्रमितहरू बडिर’हेका छन, अ’स्पतालमा ठाउ छैन ।
वें’टिलेटर छैन, अक्सि’जन छैन, जनताले भ्या’क्सिन लाउन पाएको छैन, निशा’देज्ञा चलिरहदा जनताले दुइ छाक खान पाएका छैनन, हामी नेपाल जस्तो संस्था र आदर्श मिश्रा जस्तो नागरिकले देशको हालत र परि’स्थितिमा सुधार ल्याऊन दिन रात ख’टिरहेका छन जून काम खासमा यो सरकारको हो!
यो सब देखदा देखदै पनि आहिलेको नाज़ुक घड़ीमा ४० अरब चू’नावमा ख’र्च ग़र्ने? देश र जनतालाई साचै यही चाहिएको हो त यो समयमा? बुझ पचाएर बस्ने? अझै पनि आफूले आफुसंग नज़र मिलाउन सकछौ ए सरकार? राति निं’द्रा रामरो लागछ?
तिम्रो देश जलिरहेको छ। जनताहरू मरी’रहेका छन। आ’क्रोश फैलिएको छ। त्रा’स छ। डर छ। अहिलेको समय र परि’स्थितिको प्राथ’मिकता बुझनुस! ४० अर्ब अक्सि’जन सिलिन्डर, आ’इसियु वार्ड, भेन्टि’लेटर, स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा, नि:सुल्क खो’प लगाउनुस सबै नेपालीहरुलाई ।
यो प्राथमि’कतामा परे जनता खुशी पनि हुँथे, राहत पनि मिल्थ्तो। जनता रहे त देश रहनछ नि होइन र ? चुनाव त बिस्तारी समय परिस्थिति ठीक भाएपछि गरौला नि!
चुना’वमा भोटको आशा गर्ने ए सरकार, भोट पाऊने लायक काम गरेर त देखाऊनुस पहिले ! बिनर्म अनुरोध।
-प्रियंका कार्कीको फेसबुक वाल बाट साभार गरिएको हो ।
Prevमलेसियामा जुन १ देखि १४ दिनसम्मको लागि पूर्ण लक-डाउन ।
Nextबजेटबारे बाबुरामको भन्छन् – एमालेले गोरखामा उमेदवार नउठाउने बुझियो !
अन्तराष्ट्रिय तथा अन्तरिक हवाई उडान तत्काल बन्द नगरिने ।